ST Zirconia Block -saareyaasha - Shiinaha ST Zirconia Block Factory & Alaab -qeybiyeyaasha
Yucera ilkaha ST zirconia block for cad / cam system / zirconium ilkaha shaybaarka CAD
Cad Cam ST Zirconia Block 98mm Yucera Qalabka Sheybaarka Ilkaha iyo Qalabka Ilkaha
1. Wada noolaansho wanaagsan. Wax xanaaq ah ma laha, dareen -celin xasaasiyadeed ma leh cirridka, mana jirto xarriiq madow oo ciridka ah. Aad bay ugu habboon tahay daloolka afka waxayna iska ilaalisaa xasaasiyadda, cuncunka, daxalka iyo kicinta kale ee aan fiicnayn ee ay keenaan ilkaha caagga ah ee caagga ah ee ku jira godka afka.
2. Jirka ilkuhu wuxuu leeyahay awood iyo adayg sare. Iska caabbinta gaarka ah ee dillaaca iyo guryaha wax -ka -qabashada ee xooggan ka dib dillaaca ayaa ilkaha ka dhiga mid xoog badan.
YUCERA Qalabka Ilkaha Beenka ah ee Nidaamka Shaybaarka Ilkaha CAD CAM Dental Super Translucent Zirconia Block
Zirconia -ka wax -ku -beddelka weyn leh ama prettau waxaa loogu talagalay taajka dusha iyo buundooyinka
Hufnaan sare u leh la -qabsiga guud iyo buundada
Ultra translucent xagga hore